UJONATHAN SCOTT UTYA IMIHLA ENEZOOEY DESCHANEL - IINDABA
UJonathan Scott utya imihla eneZooey Deschanel
Inkwenkwezi ye-HGTV uJonathan Scott kunye nomlingisi uZooey Deschanel bebethandana ukusukela nge-Agasti ka-2021. Ngexesha lodliwanondlebe lwangokuUmboniso kaCarlos Watson, Kunye nomntakwabo kunye no-Celebrity IOU owayedlala naye u-Drew Scott, uJonathan wakhankanya ukuchitha ixesha no-Deschanel.
UJonathan Scott Uxoxe ngemihla kunye noZooey Deschanel
Ngelixa sincokola noCarlos Watson, uJonathan wayehlala enamaqhinga wokuba uceba ukutshata intombi yakhe eneminyaka emibini. UDrew wayedumile, nangona kunjalo, ukuba uyabulela umntakwabo ngobudlelwane noDeschanel.
Ndiza kukwazisa, bekukuhle kakhulu ukubona uJonathan onwabe ngokupheleleyo ngenxa yakhe kwaye uZooey ulunge kakhulu omnye komnye. Bathanda ukunika kakhulu, ngathi, ngentliziyo iphela omnye komnye. Ndiyathanda kakhulu ukuyibona loo nto, ukhankanyiwe uDrew.
UWatson emva koko wacela ukuba uJonathan noDeschanel babe nomhla kunye noDrew kunye neqabane lakhe, uLinda Phan. UJonathan uphendule wathi yena nentombi yakhe bonwabele umthambo omnye ngokukodwa.
Sithanda kakhulu malunga namagumbi okubaleka. Siligqibile iqela labo kuyo yonke indawo emhlabeni. Senze nje okokugqibela ubusuku bokugqibela, ngokulula thina babini. Ngokwesiqhelo sizakuhamba, Drew, Linda, Zooey, mna, kunye nomhlobo omnye okanye ababini abahlukeneyo ngokuchanekileyo, ukhankanyile uJonathan.
UDrew emva koko wabelana ngokuba uziphethe ngendlela enobukrakra nkqu nakwimihla kaPhan.
Umlingane wam uchonge oku kwasekuqaleni. Ndiyamthanda kakhulu. Andisoze ndibengumyeni omvumela ukuba aphumelele, kuba ndinqwenela ukumvumela ukuba aphumelele ukuba abe chivalrous - andinguye - ayindim lowo. Ndiza kukhuphisana ndidiniwe kwaye ngelixa undibetha, uyithambisa ebusweni bam, ixesha elikhulu. Ke ngoku siyigqibile i-bowling, sigqibile i-ping pong, ndiyinxalenye enkulu ye-ping pong, utyhile uDrew.
UJonathan waxhasa isibhengezo somntakwabo sokufumana uluhlu olunobundlongondlongo.
UDrew uthathe iiklasi, akukho siqhulo, esivela kwi-ping pong grasp kangangeminyaka eli-10. Yiyo indlela anochuku ngayo uDrew, okhankanyiweyo kumvuseleli odumileyo.
UJonathan Scott ukhankanyiweUkuyila kukaZooey Deschanel ngoJuni 2021
Ngexesha leNgoJuni 2021 udliwanondlebe nombhali uCathy Heller, UJonathan noDrew Scott bathethe ngemfihlo yabo yokuphumelela. Xa u-Heller wacela iinkwenkwezi ze-HGTV into ababekholelwa ukuba yeyona ndlela ilungileyo kwishishini, uJonathan uphendule wathi ubona kufanelekile ukuba athathele ingqalelo amandla akho kunye nobuthathaka bakho.
Kuya kufuneka uthembeke kwisiqu sakho kwaye kunye namaqabane akho malunga noko, ukuze sonke sazi amandla ethu kunye nokusilela kunye nendlela esizinzileyo ngayo. Akukho mbambano wokuqonda indawo yakho ebuthathaka, oko kuthetha ukuba unokumisela iindlela ezilula zokusombulula loo nto. Ndikuthanda kakhulu ukubuyisa umva yonke into esiyenzayo kubomi beshishini lethu nakwimisebenzi yethu yepropathi, uyilo, konke kulungisa ukubuyela umva, utshilo uJonathan.
Uye emva koko wabelana nabanye ukuba uyakholelwa ukuba abantu abanobuchule kungenzeka bangabi ngamashishini alungileyo kwaye kungenjalo. Uye ke wabelana ukuba kukho indlela yokufumana uzinzo phakathi kwe-2 ngeshishini ngalinye kunye nabahlobo abathandanayo. Umntu oneminyaka engama-43 ubudala uchaze ukuba u-Deschanel no-Phan, abayi-Scott Brothers Entertainment's director director, bane-mind-set set-mind.
Ngaphandle kwamaqabane ethu, kwiqabane likaDrew uLinda kunye nentombi yam uZooey, ngabo bantu banobuchule obukhulu, abathi bona bandise ubuchule kuthi emva koko kungumjikelo ongapheliyo, ekwabelwana ngawo ngoJonathan.
Izigaba: Umqala Iwiki Tech-Iindaba
UReese Witherspoon-ukubaluleka kweNet, i-Bio, iWiki, ubudala, uKhathalelo, ubude, umhla wokuzalwa
UReese Witherspoon ngumdlali weqonga ngokomsebenzi. Jonga ezinye iinkcukacha ngeBiografi, iNet Worth kunye noMvuzo, ubudala, umsebenzi, iiMovie kunye neMidlalo yeTV, ngokusemthethweni Blonde, Iincwadi, Abazali, Abantakwenu, abatshatileyo, uRyan, uJim Toth, uAva Phillippe, umhla wokuzalwa, iWiki, iinyani, ubunzima, iindaba , Ubuzwe, Udumo, kunye nokunye.
'Solo' Star Alden Ehrenreich Ibiza amajelo eendaba kwiHyping Negative Box Office
I-Kathryn Eastwood Biography, Ubudala, ukubaluleka kweNet, ubude, i-Wiki
UAngelika Oles Biography, Ubudala, ukubaluleka kweNet, ubude, iWiki
U-Ashley Iaconetti wabelana ngePick Baby Bump Pic kwiiveki ezili-18
UBerna Canbeldek ubiza i-CT Tamburello: 'Eyona nto imbi kunabo bonke'
Ukunyuka kunye nokuwa kuka-Adam Parry- umqeqeshi webhola ekhatywayo owabiweyo kwiqela lebhola ekhubazekileyo
U-Tig Notaro uxakwe yi-Twitter Reaction kwi-Sexy yakhe ye-AF 'yoMkhosi wabafileyo': Ndandinje, Yintoni leyo?
I-Ex Miranda Kerr yeOrlando Bloom iphendula kwiindaba zikaKaty Perry zabantwana
Ubushushu njenge-Chester-le-Street GPs zishiye iiveki zokulinda kugonyo lwe-coronavirus
Kwenzeka ntoni ngoNorman kunye noPhoenix?
UAndy Cohen utyhila okuninzi malunga nokubuya kweRHOC kaHeather Dubrow
UJess noDan batshatile xa uqala ukubabona
I-khalil underwood yenet efanelekileyo
Ngaba ii-starbucks zivuliwe ngomhla we-4 kuJulayi
iiconsers zibuye zibuyele phezolo
Ngaba i-usps ihambisa ngemini yemartin luther king